Xen 4.15 Inosvika neRarama Rutsigiro Rutsigiro, ARM Enhancements uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi misere yekuvandudza iyo nyowani vhezheni yemahara Xen 4.15 hypervisor ichangoburitswa uye mune iyi vhezheni nyowani inogadziridza yebazi reXen 4.15 ichagara kusvika Gumiguru 8, 2022 uye kuburitswa kwekugadziriswa kwekugadziriswa kusvika muna Kubvumbi 8, 2024.
Kune avo vasina kujaira Xen, iwe unofanirwa kuziva izvo yakavhurwa sosi chaiyo muchina wekutarisa yakagadzirwa neYunivhesiti yeCambridge. Dhizaini yekugadzira ndeyekukwanisa kumhanyisa zviitiko zvinoshanda zvehurongwa nenzira inoshanda zvizere pane imwechete komputa.
Xen inopa yakazvimiririra yekuzvimiririra, kudzora zviwanikwa, mhando yevhisi yebasa uye inopisa inopisa muchina kutama. Masisitimu anoshanda anogona kushandurwa zvakajeka kuti amhanye Xen (uku uchichengetedza kuenderana nemashandisirwo emushandisi).
Main makuru maficha muXen 4.15
Mune iyi vhezheni nyowani mumaitiro Xenstored uye Oxenstored akawedzera rutsigiro rwekuyedza rwekuvandudza kwehupenyu, inogonesa zvigadziriso zvekugadziriswa kuti zviunzwe uye zvishandiswe pasina kutangazve iyo nharaunda nharaunda, pamwe yakawedzera rutsigiro rweyakabatana bhuti mifananidzo, Inokutendera iwe kuti ugadzire system mifananidzo iyo inosanganisira Xen zvinhu. Iyi mifananidzo akaiswa mukati seimwe chete EFI binary iyo inogona kushandiswa kubhurisa inomhanya Xen system yakananga kubva kuEFI boot maneja isina yepakati bhuti vatakuri seGRUB. Mufananidzo wacho unosanganisira zvinhu zveXen senge hypervisor, kernel yenzvimbo yekutambira (dom0), initrd, Xen KConfig, XSM kumisikidzwa, uye muti wedhizaini.
Yeplatform ARM, mukana wekuyedza wekumhanyisa michina yemidziyo inoitwa pane iyo dom0 host system padivi, kubvumidza kuteedzerwa kwezvisimba zvemidziyo yemidziyo yevaenzi masisitimu anoenderana neArM yekuvakisa. YeArM, rutsigiro rweSMMUv3 (System Memory Management Unit) inoitwawo, izvo zvinovandudza kuchengetedzeka uye kuvimbika kwekutumira michina mumaARM masystem.
Tinogona zvakare kuwana izvo akawedzera kugona kushandisa IPT Hardware yekutevera michina (Intel Processor Trace), iyo yakaonekwa ichitanga neIntel Broadwell CPU, kuburitsa dhata kubva kumasisitimu evaenzi ekugadzirisa zvigadzirwa zvinomhanya padivi reSisitimu. Semuenzaniso, unogona kushandisa VMI Kernel Fuzzer kana DRAKVUF Sandbox.
Wakawedzera rutsigiro rwemamiriro eViridian (Hyper-V) kumhanyisa Windows vashanyi vachishandisa zvinopfuura makumi matanhatu nematanhatu maPCU uye PV Shim denderedzwa rakagadzirwazve yaishandiswa kumhanyisa unmodified paravirtualized (PV) vashanyi munzvimbo dzePVH neHVM (inobvumira vashanyi vakura kumhanyisa munzvimbo dzakachengeteka dzinopa kuzvisarudzira kwakanyanya). Iyo itsva vhezheni yakagadziridzwa rutsigiro rwekumhanya PV vashanyi masisitimu munzvimbo dzinotsigira chete HVM modhi. Kuderedzwa kwehukuru hweiyo interlayer, nekuda kwekudzikiswa kweiyo chaiyo HVM kodhi.
Pamwe chete neiyo Zephyr chirongwa, seti yezvinodiwa zvekodhi uye nhungamiro zvichibva paMISRA_C standard iri kugadzirirwa kudzikisa njodzi dzekuchengetedza nyaya. Static analyzers anoshandiswa kuona kusawirirana nemitemo yakagadzirwa.
Yakaunza iyo Hyperlaunch danho rekupa inoshanduka maturusi ekugadzirisa iyo yakagadzika seti yemamishini chaiwo kuti amhanye panguva yebhoti.
Unyanzvi hwevadzvanyiriri veVirtIO pane masystem eARM hwakagadziridzwa seIOREQ sevhisi yekumisikidza inofungidzirwa, iyo inorongwa kuti ishandiswe mune ramangwana kusimudzira kuona kweI / O uchishandisa zvibvumirano zveVirtIO.
Basa rinoenderera mberi pakuitwa kweXen chiteshi cheRISC-V processor. Parizvino, kodhi iri kuvandudzwa kuti itore chaiyo memory pane iyo inomiririra uye yevaenzi parutivi, pamwe nekugadzira kodhi yakanangana neiyo RISC-V yekuvakisa.
Icho chirongwa chakakurudzira pfungwa yedomB (boot domain, dom0less), izvo zvinoita kuti zvikwanise kuendesa pamwe nekuitwa kwenzvimbo yedom0 kana uchitanga chaiwo michina padanho rekutanga re server kutanga.
Kuenderera mberi kusanganiswa kwakagonesa Xen kuyedza paAlpine Linux uye Ubuntu 20.04.
CentOS 6 bvunzo dzakaraswa.
QEMU-yakavakirwa dom0 / domU bvunzo dzakawedzerwa kune inoenderera yekubatanidza nharaunda yeARM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Xen 4.15 inosvika iine live yekutsigira rutsigiro, ARM zvinowedzera uye nezvimwe